Kujahwephi kuvulwa izikole sesibheke kuvuthondaba lokhuvethe? - Bayede News
by ngu-Allen Thompson
UThompson unguMengameli wenyunyana yothisha iNatu.
Izithangami zokubeka izimvo zeDA KwaZulu Natal
Udaba lokuvulwa nokuvalwa kwezikole wudaba olusezinhliziyweni zabobonke abantu baseNingizimu Afrika abasebenzayo nabangasebenzi, abadla izambane likampondo nabantulayo bonke bakholelwa kakhulu ekufundeni kwezingane zabo ukuze imindeni yabo ikhone ukuthuthuka futhi iphile impilo encono kunempilo bona abayiphilayo njengamanje. Yingakho namuhla ngikhethe ukuphinda ngibhale ngalolu daba ngoba lusithinta sonke sithanda noma singathandi.
Injongo enkulu yokubhala kuleli phephandaba namhlanje ukuzama ukubheka izinkinga ezibhekene nohlelo lwezemfundo lwamabanga aphansi lwaseNingizimu Afrika. Izigameko zakamuva yizona ezenze ngafisa ukubuyela emuva ngibheke kabanzi izinkinga nezinqinamba imfundo yethu ebhekane nazo. Kungithokozisile ukuzwa ozakwethu sebecula iculo ebesilokhu silicula njengenyunyana yothisha iNATU elithi makesilinde kwehle izinga lokuthelelana kwabantu kuqala ngaphambi kokuthi sivule izikole. Manje sizwa zonke izinyunyana nezinhlangano ezingenzi inzuzo zivungama ngokubaluleka kokuhlaba ikhefu ngalesi sikhathi esibucayi kangaka. Noma kunjalo kusekhona abantu abacabanga ukuthi iNATU ifuna othisha bahole imiholo yabo behlezi emakhaya. Abanye bathi othisha abafuni nje ukusebenza futhi abanandaba nemfundo yezingane zabo bazicabangela bona. Njengomunye wabantu ababambe iqhaza ekufundisweni kwabantwana nasekuqikeleleni ukuthi othisha basebenza ngendlela efanele futhi basebenzela ezindaweni eziphephile, ezihlanzekile nezifanele ukuthi abafundi bangafundela kuzo.
Kuyajabulisa futhi kuyaduduza ukwazi ukuthi ngalesi sikhathi esinzima kangaka kukhona ososayensi abasebenza noMnyango Wezempilo Kanye nabahlalela ukucebisa uMnyango Wezemfundo. Kuhle nokwazi ukuthi umyango wezemfundo usebenzisana nethimba lososayensi abasezingeni eliphezulu abahlonishwa umhlaba wonke. Kepha kuyadumaza ukubona ukuthi imibono yososayensi ibukeka sengathi ayimile ndawonye ishintsha imibala nsuku zonke kuye ngokuthi uMnyango Wezemfundo noma uHulumeni ufunani ngaleso sikhathi. Lokhu kungcina sekwenza kube nokungabaza ngobuqiniso bemibono ebekwa ososayensi. Imibono ebekwa ososayensi ibukeka sengathi iphekiwe ukuze isithothobalise bese osopolitiki noma uMnyango benze noma yini abafuna ukuyenza ngoba bethi iqinisekisiwe ososayensi.
Kuvulwe izikole ezingenawo amanzi, ezingenazo izindlu zangasese, ezingenawo amakilasi anele ukuze abafundi bahlale ngokuqhelelana bese umfundi ahlale ngayedwana esitulweni ukuze angathelelani nomunye uma kwenzeka ethola lesi sifo. Ngabe lokhu kuvulwa kwezikole ezinjalo kuqinisekisiwe yini ososayensi, impendulo ithi cha kepha kuyenzeka futhi akekho olwisana nakho.
Inhlangano yezizwe ebhekele izindaba zezempilo zomhlaba wonke ebilokhu ilekelelana neNingizimu Afrika ekuqinisekiseni ukuthi iNingizimu Afrika iyakwazi ukubhekana nalolu bhubhane oseluqede abantu abaningi emhlabeni wonke ikakhulukazi emazweni aphesheya ihlabe umkhosi kuleli viki yathi icela kungabi nezwe elizovula izikole zalo uma ukuthelelana kwabantu emphakathini ngalesi sifo kusadlangile. Besilindele ukuthi iNingizimu Afrika eqale kulo nyaka ukuhlaselwa ilolu bhubhane nekade ithatha zonke izeluleko zale nhlangano yamazwe omhlaba izophinda futhi ithathe lesi seluleko.
Kepha sibone iNingizimu Afrika igijimisa phambili ososayensi bayo ukuthi abasitshele ukuthi abukho ubufakazi bokuthi abafundi nothisha bathola lolu bhubhane ngokuya esikoleni, baphinde bakhipha umbiko othi abukho ubufakazi bokuthi abafundi bangathelela othisha kanye nabazali babo ngalolu bhubhane okuyinto ephikisana nobufakazi obuqoqwe yile nhlangano esimkantshubomvu ngezindaba eziphathelene nokhuvethe njengoba sekunabantu abasondele esigidini asebeshonile ngenxa yokhuvethe kepha iNingizimu Afrika ilekelelana nabo labo ososayensi bakhombisa ukuphikisana nemibono yale nhlangano.
Yikho-ke sithokoza ukuzwa ozakwethu sebekhulumela phezulu ngokubaluleka kokuvalwa kwezikole manje emva kokuzwa lo mbono wale nhlangano yezizwe lapho ibixwayisa amazwe afana neNingizimu Afrika enabaholi abafuna ukusebenzisa ukhuvethe ukugcwalisa izikhwama zabo ukuthi angalinge adlale ipolitiki eshibhile ngokuvula izikole ngesikhathi inani labantu abathola lesi sifo liya ngokwanda. Sithi thina njengeNATU sekunabafundi abaningi asebeshonile ngenxa yalolu bhubhane, kunothisha abaningi esebeshonile ngenxa yalolu bhubhane nezisebenzi eziningi kakhulu eziqashwe uMnyango Wezemfundo asebelahlekelwe izimpilo zabo ngenxa yobudedengu boMnyango Wezemfundo ngokuqhubeka nokuvula izikole nokwandisa inani labafundi okufuneka baye esikoleni ngesikhathi kwanda abantu nabathola lesi sifo nabashonayo ngenxa yakho lokhu kufa.
Sithi sincenga abaholi ukuthi bayeke ubugovu, bacabangele implilo yabafundi okungenani njengoba siyazi ukuthi othisha bababukela phansi, futhi asazi ukuthi benzani kuHulumeni njengoba belindeleke ukuthi bayofundisa emakilasini angenamanzi, minyango, namafasitela angenazo ngisho izindlu zangasese ngesikhathi esibucayi kangaka. Uma uMnyango kanye nososayensi sezikhala izinduku bavika ngokuthi kuncane kakhulu abakwaziyo ngalesi sifo, uma befuna ukudlala ipolitiki bathi bayazi ngalesi sifo ngakho kuphephile ukuya kwabafundi nothisha ezikoleni, ngabe isayensi leyo noma ipolotiki yesisu na?
Ngiyafisa ukuthi labo sosayensi abaqale ukuphenya ngokhuvethe kulon yaka bangangiphendula njengoba sebezizwa benamandla okuphikisana neWorld Health Organization uma ithi akungapolitikwa ngekusasa nempilo yezingane.
Siyathanda ukwazisa umphakathi ukuthi ukufundisa abantwana kuyinto esiyifundele futhi esiziqhenyayo ngayo, ngakho sizimisele ukwenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuthi ikusasa labantwana liyahlengeka ngaphandle kokubeka impilo yabo esichengeni. Sesikhathele ukufundisela amathuna nokugcwaba izincithabuchopho zothisha ezingakhathali ukufundisa ebezifundisa ubusuku nemini nangamaholidi nemiGqibelo namaSonto ngenxa yabantu abangenendaba nemfundo kepha abanendaba nokuthi bazozuzani uma bephoqa izimo beqhuba othisha nezingane bebasa emathuneni.
Kujahwephi kuvulwa izikole sesibheke kuvuthondaba lokuvethe iCorona?
Lona ngumbuzo iNatu ewubhekise kuNgqongqoshe Wemfundo Eyisisekelo umama u-Angie Motshekga njengoba sanda isibalo sabafundi nothisha abasuleleka ngokhuvethe. Ake sikucacise zisuka amadaka ukuthi sifuna izikole zivalwe kusuka eBangeni R kuya eBangeni 11, bese umatikuletsheni uzanyelwa izinhlelo zokuthi ufunde ngoba iphepha selasethwa kudala elizobhalwa ngoLwezi.
Kodwa akuwakhi umqondo ukuthi amanye amabanga angaqhubeka afundise ekubeni othisha benokhwantalala ngoba abanye ozakwabo abebenabo estaffrooom bedlulile ngenxa yalo mbhedukazwe.
Abafundi nabo basuleleka ngaleli gciwane nsuku zaphuma kanjalo sekunothisha asebeze baya kobandayo ngenxa yalolu khuvethe. Muva nje uMengameli wezwe uMnu uCyril Ramaphosa uxwayise ngokuthi izwe selifikile kuvuthothanda lwalolu khuvethe. NoNgqongqoshe Wezempilo uDkt uZweli Mkhize ushilo ukuthi lokhu abebelokhu bekubikezela kusuka ngoNdasa kuvalwa thaqa izwe sekufikile.
Lokhu kusho ukuthi kusuka manje kuya kuMandulo isimo sizoba mazonzo, izingane zizogula ngapha nangapha. Nothisha kanjalo basengozini enkulu ngoba bambalwa abavunyelwe ukuthi basebenzele emakhaya, inqwaba isebenzela ezikoleni.
INATU itholile ukuthi nezibalo okuthiwa yizona zokusuleleka kwabantu azishayi emhloleni. Kuyingozi ukuqhubeka kuvulwe izikole ngoba lokho kungasho ukuthi kuzovalwa ngehlahla kufe inqwaba yabantu ekubeni yini le engaka ejahiwe, kuphangelwani umdaka izulu linganile? Ingozi isephezulu njengoba izikole zivuliwe uma uqhathanisa nesikhathi lapho zazivalwe khona.
Sezikulungele ukuvula izikole zaKwaZulu-Natal – uSibiya
Izibalo zikhomba ukuthi nsuku zonke siyanyuka isibalo sabaya kobandayo selokhu kwehliswa isigaba sisuka kwesihlanu saya kwesesithathu.
Inhloso yomvalelwakhaya kwakuwukusindisa impilo yabantu kodwa ngokuqhubeka kuvulwe izikole lokhu kubukeka sengathi kuzofana nje nokuthi akwenziwanga lutho. Abafundi nothisha bazothatha ukhuvethe baye nalo emakhaya lapho kukhona ogogo nabantu abaphila nezifo ezingamahlalakhona abasengozini enkulu yokuthi bashone uma bethola lolu bhubhane.
Kuyacaca ukuthi kubhekelwe kakhulu umnotho njengoba kulokhu kuvulwa izwe. Asiphiki ungavulwa umnotho kodwa lokho kuvalwe izikole ukuze abafundi bangabi sengozini. Amazwe amaningi awuvulile umnotho kodwa angazivula izikole.
EKenya izikole zivaliwe kuze kube owezi-2021. IKenya izwe elingasondeli kwelakuleli ngezibalo zabahaqekile kodwa uhulumeni wakhona ukwazile ukuvala izikole. Kungani singasiki iphethini sizivale izikole sivulele kuphela umatikuletsheni? Sisheshe sazivula izikole singakafiki kuvuthondaba, kujahwephi? Yini le engaka ephusha uHulumeni ukuthi avule izikole? Ubani ozuzayo ngokuvula izikole?
Kungabe kucatshangelwa osomathenda ngokwenza lokhu? Okubuhlungu ngukuthi umnyango uma usumile esinqumeni sawo, uhlabela phambili noma ningazama kanjani ukuwubonisa ukuthi wenza iphutha. Isifundazwe esinesibalo esincane sezikole iNorthern Cape ivale izikole ezingama-48 ngenxa yokhuvete.
Ngomuso isimo sisazoba sibi kakhulu kunokuthi sibe ngcono. Yingakho siphakamisa ukuthi izikole zivalwe, kuvulwe kuphela umatikuletsheni. Akusetshenziswe ezinye izindlela zokufundisa kungayiwa emakilasini. Akusizwe abakwamatric ukuthi baphothule unyaka, kubhekwe ukuthi nabo abasuleleki. Akube nezinkambu zokufundela kukamatric, kunamahhotela abekelwe ukuthi avalele labo abahaqwa wukhuvethe, akube nezinsiza ezifuze lezi nakumatikuletsheni. Abahlinzekwe ngezinsiza okubalwa amaselula, amalaptop nezinye izinsiza ukuze kube lula ukufunda.
Lesi simo sokusuleleka kwabafundi nothisha ngokhuvethe singagwemeka, uMnyango awulalele ikhwelo lezinyunyana zothisha nezinye izinhlaka ukuze kuvalwe izikole. Uhlelo loMnyango lokuthi kusheshe kuvulwe izikole alusebenzi, asithembe uMnyango uyakubona lokhu. Azivalwe izikole, kuphephe abafundi nothisha ngoba asazi kujahwephi, izwe nomhlaba kubhubha ngenxa yokhuvethe. Sincenga uNgqonqoshe Wezemfundo uMama u-Angie Motshekga ukuthi akangasishayi indiva isexwayiso senhlangano yezizwe esithi: “wonke amazwe kufanele aqale ukuvula izikole uma inani labantu abatheleleka ngalesi sifo ngosuku selehlile”. Thina sisuka kubantu abali- 100 ngosuku sesikhuphukele kubantu abayizi-12 000 ngosuku, okusenza sibe izwe lesishiyagalolunye emhlabeni jikelele ngokwesibalo sabantu abaningi abahlaselwe ukhuvethe lokhu ubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi uma siqhubeka sizokwanela la mathuna ayizigidi uHulumeni abonakale esigubhela wona abanenhlanhla bazogcwala izibhedlela namahhotela nazozonke izindawo ezisimele esezikhokhelwe ukungenisa abantu abazongenwa yilo mbulalazwe. Kujahweni?
ngu-Allen Thompson Jul 17, 2020